Nhau - Vatorwa vanotaura Chinese zvakanaka ita izvi!
Munguva pfupi yapfuura, mudzidzi ane zero zero hwaro, mushure mekudzidza makirasi matatu, akandiudza kuti achachinjira kumudzidzisi ane hunyanzvi muChirungu chemuromo nekuti aisada kudzidza Chinese girama kana zvinhu zvine hukama neHSK, asi aingoda kudzidza mimwe mitauro yehupenyu hwezuva nezuva, senge Kutenga matikiti emhepo, mashopu paTaobao, nezvimwe… zvakanaka… Ndakaona ramangwana rake reChinese.
Zvisinei nemutauro waunodzidza, zvakakosha zvikuru kuvakira hwaro. Grammar uye mazwi akakosha. Ndiri kuda kumhanya ndisati ndasimuka, uye handikwanise kutsungirira kudzokorodza zvishoma. Kune chete kuguma uye hazvibviri kutaura nemutauro uyu. Zvichida, vazhinji vevadzidzi vechipiri mutauro vakawira padanho rekutanga, uye chinhu chete chavanogona kudzidza kana vachishuvira kubudirira nekukurumidza uye nekukurumidza purofiti inogona kungodzidziswa chete.
Saka vazhinji vekunze vanotaura chiChinese zvakatsetseka uye vanoshandisa mazwi echokwadi atinowana muhupenyu, vanozviita sei?
Kunyangwe iwe uri kudzidza Chinese muChina kana kwete, panofanira kuve nevanhu vechiChinese vakakukomberedza kuti vataure newe. Muchidimbu, mutauro unozoita ngura. Izvo zvaunodzidza mukirasi zvinokanganikwa kana ukasazvishandisa kazhinji muhupenyu. Iyo mukoma mudiki uyo anotengesa zviyeuchidzo muMorocco akadzidza Chinese kubva mutubhu ndokuchishandisa kune vashanyi mangwana acho. Akavhura muromo wake paakavhura muromo wake kune akakurumbira maChinese online majee.
Neraki, isu tiri kurarama munguva yekuputika kweInternet, zviwanikwa zvekudzidza zvakagovaniswa pasirese, uye isu tinokwanisa kushandisa iyo nguva yakakamurwa kudzidza mitauro yekuChina inotaurwa uye nekupenya mavhidhiyo echiChinese; kana tichida kurangarira mavara echiChinese, makadhi ekupenya anopenya. Ivo vamwari vakuru avo vakanaka pakudzidza mutauro, vasingaunganidze zviuru zvemaawa uye kugona mitauro yekune dzimwe nyika mumazuva mashoma, vari kubiridzira Yindi.
Tora chikamu muzviitiko mumutauro mutsva:
Tora danho rekutora chikamu mukutaura, madrama, kubata, kuimba, nezvimwe, chero chaunoda. Paunogadzirira zviitwa izvi, haudi kunyatsorasa kumeso pachikuva. Panguva ino, iwe uchabata nemusoro izvo zvemitauro yekune imwe nyika zvakanyatsonaka, uye iwe uchafunga zvakanyatsonaka nezve kusarudza mazwi uye kugadzira mitsara, uye yako mataurirwo ekukurumidza Nenzira iyi iwe unozodzidza Chinese makore akati wandei gare gare. Zvakaoma kukanganwa.
Shandisa nharembozha yako kunyora uye teerera kurira rwekutanga rweChinese chako:
Nyora chidimbu cheChinese iwe chaunotaura zuva rega rega, kunyanya mune icho chaicho chirevo. Ini ndinotenda kuti mushure mekuteerera kududziro inonzwa zvakanaka nezvako, hauchazove nehushingi hwekuseka vamwe. Panguva iyi, uchaona kuti hauzive mataurirwo ezvinhu zvaunowanzoshandisa muhupenyu hwako, zvakaita sedhishi rekuwachira muriwo, mapombi, nezvimwe. Mamwe mataurirwo awaimbove uine chivimbo anogona kunge ari kunze yemarimba, uye girama yausingatarise inogona kunge isiri iyo. Tsvaga dambudziko rako uye iwe uri hafu yehondo.
Zvininipise, haugone kubata zvese:
Kuzvininipisa haisi hunhu hunozivikanwa nenyika dzese, asi unogona kuva nechivimbo, usazvitutumadze, kune vamwe kunze, uye haugone kudzidza chero mutauro.
Chero bedzi usiri mutauriri webazi rezvekunze, unenge watadza kana ukakanganisa, uye haubhadhariswe faindi. Chero bedzi iwe uchizvitaura, vanhu vazhinji vechiChinese vanogona kuzvinzwisisa chaizvo, uye vanogara vachishivirira kutaura chiChinese kuvatorwa. Kamwe kana vachinyara kana kurasikirwa neuso, ivo vanogara vachirangarira iyi poindi. Pasina kushandisa chirevo, dambudziko harife rakawanikwa.
Tsvaga chiratidzo chemutauro chekuteedzera.
Tsvaga hunhu hwakafanana nezwi rako uye iwe unoda kutevedzera matauriro aanotaura. Izvi zvinoshanda kwazvo mukuvandudza mataurirwo ako, mutinhimira, kumhanya kwekutaura, nezvimwe.